Ugudambeyn, ma ahan sanadihii noloshaada lagu tirin lahaa. Waa nolosha sannadahaaga. - Abraham Lincoln - xigasho Pedia
Waxaan da 'ahaan ugu tirinaa da'deena sannado, miyaanay ahayn? Weligaa miyaad ka fikirtay haddii taasi dhab ahaan tahay habka lagu tiriyo intaad noolaa? Dhamaadka maalinta, marna kuma xirna sannadaha noloshaada in lagu taliyo! Waxay ku saabsan tahay nolosha sanadahaaga.
Markaan u dabaaldegno dhalashadeena, dhalashada waxaan shumaca u shidannaa sanadka da’deena, laakiin waxaan u muuqanaa inaan ilaawayno inaysan ahayn da'da ama tirada sano ee aad ku nooleyd.
Noloshaada weligeed da'da kama xirna, laakiin had iyo jeer waxay ku saabsan tahay maxaad sameysay si noloshaas qiimo la yeelo? Ma ahan sannadihii nolosha ee walwal ku haysa!
Waxaa jiray dad aad u badan oo sannado badan noolaa laakiinse ku guul daraystay inay wax macno ah sameeyaan. Dhanka kale, waxaa jira dad yar oo ku dhintey da 'aad u yar, laakiin waxaan wali u xasuustaa wax ay u sameeyeen dad kale aawadood.
Markaa, nin laguma xasuusto tirada sannadihii uu noolaa, laakiin camalkiisa.
Halkii aad ku noolaan lahayd nolol dheeri ah oo aadan wax caqli gal ah sameynin, waxaa muhiim ah inaad sameyso wax macno leh sanadaha aad ku nooshahay.
Hadaad rabto inaad hubiso inay dadku ku xasuusiyaan xiitaa markaad kabaxday, iskuday inaad sameyso wax ku kallifaya inay kugu faani karaan.
Noloshaada ku dhex samee sannadahaaga, halkii aad ka xisaabin lahayd sanadaha aad nooshahay!
Kala hadal qiimaha
Quotes Life caan ah
Xigashooyin caan ah oo ay sameeyeen dadka caanka ah
Dhiirrigelinta xigashooyinka nolosha
Noloshu Waa Qormooyin Gaaban
Ereyada nolosha iyo xigashooyinka
Xigashooyinka kor u qaadida nolosha
Wax kastoo aad tahay, noqo mid wanaagsan. - Abraham Lincoln
Uma dhisi kartid dadka inay fiicnaadaan, laakiin hubaal waad noqon kartaa mid! Dad fara badan oo hareeraha jooga…
Kama baxsan doontid masuuliyada berrito adoo maanta ka cararaya. - Abraham Lincoln
Ogow nolosha, ma sii wadi kartid inaad ka baxsato waqtiga oo dhan. Waa muhiim in la fahmo taas…
Qeybta ugu wanaagsan ee qofka noloshiisa waxay ka kooban tahay saaxiibtinimadiisa. - Abraham Lincoln
Iskuulka, waligey waxaan ahaa laf-dhabarta iyo marka maanta, markaan dib u eego, waligey ma xasuusto…
Isii lix saacadood si aan u jaro geed waxaanan ku bixin doonaa afarta ugu horeysa ee faashadayda. - Abraham Lincoln
Heerka diyaargarowgaaga ayaa go'aaminaya guushaada. Haa, taasi waa run! Hardwork ayaa hubaal ah inay dib kuu siin doonto. Adiga…
Sida ugu wanaagsan ee loo saadaalin karo mustaqbalkaaga waa in la abuuro. - Abraham Lincoln
Waxaa si sax ah loo sheegay in habka ugu fiican ee aad dhab ahaanti saadaalin karto mustaqbalkaga ay tahay…